शिखर पुरुष उत्तम नेपालीको निधन – SaipalNews.com
Saturday, 31, July, 2021	info@saipalnews.com
शिखर पुरुष उत्तम नेपालीको निधन
काठमाडौ ६ साउन । नेपाली आधुनिक चित्रकला क्षेत्रका शिखर पुरुष उत्तम नेपालीको आज बिहान निधन भएको छ । काठमाडौँ किलागल टोलमा विसं १९९४ वैशाख १८ गते जन्मिएका ललितकलाकर्मी नेपालीको मुटुसम्बन्धी समस्याको उपचारका क्रममा मनमोहन कार्डियोथोरासिक एण्ड भास्कुलर सेन्टरमा निधन भएको हो ।
किलागलमा पिता विष्णुप्रसाद कर्माचार्य र माता रत्नदेवीका कोखबाट जन्मिएका नेपालीसँग निजामती सेवाको पनि लामो अनुभव थियो । तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद् सदस्य नेपालीले चौध पटकभन्दा बढी एकल चित्रकला प्रदर्शनी गरेका थिए ।
साहित्यकार नेपालीका लेख, रचना र कविता पहिलोपटक विसं २०२१ मा मधुपर्कमा प्रकाशित भएको थियो । उनको ‘बिना शीर्षक’ कविता सङ्ग्रह २०६१ सालमा प्रकाशन भएको छ । कवि र साहित्यकारको मुहारचित्र बनाई प्रदर्शन गरेका उनी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०५४ र सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय पदकबाट सम्मानित भएका थिए । उनका श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन् ।
ओलीको दुई तिहाइ सरकार किन असफल ? नागरिकमाथि महँगीको भारी !
ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई खाजा र चकलेट !
ओली पक्ष ओरालो लाग्दै, संसदीय दलमा पनि प्रचण्ड र नेपालको बहुमत
विदेशमा बसेर गाउँ चम्काउँदै लोकप्रसाद
चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंंद्वारा अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा स्थगित
नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच फोन वार्ता
नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजी एआईजीमा सिफारिस
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एक सङ्क्रमितको मृत्यु